शरिरमा सबैभन्दा धेरै प्वाल छेडेर रेकर्ड राखेका यी मानिस, जसले निकाले निधारमा यस्तो चीज!!! (भिडियो) – News Nepali Dainik
शरिरमा सबैभन्दा धेरै प्वाल छेडेर रेकर्ड राखेका यी मानिस, जसले निकाले निधारमा यस्तो चीज!!! (भिडियो)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष २८, २०७७ समय: ७:२५:२२
काठमाडौं – विश्वमा धेरै प्रतिभा भएका मानिसहरु छन् । मानिसहरुले आफ्नो अनौठो प्रतिभा देखाएर विश्वलाई नै चकित पार्दै विश्व रेकर्ड पनि राखेका छन् । मानिसहरुले विश्वसामु चिनिन र विश्व रेकर्ड राख्न विभिन्न अनौठो कार्यहरु गरिरहेका हुन्छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Last Updated on: January 12th, 2021 at 2:19 pm